ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(4) | Lumyo Chit
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(4)
1310 ယောက် ကြည့်ပြီးပြီ
Permalink kotinmaung က December 23, 2011 – 12:42pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
မနေ့က အမှတ်(၄၀) ၊၁၅၅ လမ်း ၊တာမွေအိမ် ကို သွားကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတော မတွေ့ခဲ့ဘူး။ဘေးက
စုံစမ်းကြည့်တောအိမ်ရှင် နာမည်က ဦးလှဝင်းဖြစ်တယ်။ အဖြူရောင် (၂ ) ထပ်တိုက် ခပ် ပုပု တစ်ခန်းတွဲ
ဖြစ်တယ်။သူတို့ နံနက် အစောကြီးအိမ်က ထွက်သွားတယ်။ည မိုးချုပ်မှ ပြန်လာတယ် လို့သတင်းရထားပါတယ်။ ဆက်တွေ့ဖို့မျော်လင့်ချက်မရှိဘူး။ဒါနဲ့ ဒေါ် အ၀ိုင်းရဲ့ ပသီဆိုင်ရာ စာအုပ် ကို လက်ဆင့်ကမ်းကူညီပေးဖို့ မေတ္တာ
ကိုသက်ကို နှင့် ဒေါ် အ၀ိုင်း – contact ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလို ဆို (ကိုသက်) ထံ ပသီစာအုပ်
ပို့ ထားရင်ကျွန်တော် လက်ထဲရောက်လာပါလိမ်မည်။ စာအုပ်ကို မိတ္တူကူးပြီး လျှင် ပြန်ပို့ပေးပါမည်။
အမျိုးသားအရေးတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီစေချင်ပါတယ်။အားကိုးစွာဖြင့် – စလာမ်
Permalink kotinmaung က December 23, 2011 – 4:04pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အနောက်ဘက်လွန်မင်းလက်ထက်တွင် ပေါ်တူဂီတို့ လက်မှ သန်လျင်မြို့ကို တိုက်ခိုက် သိမ်း ယူသည်။
၁၆၁၂ ခုနှစ် တိုက်ပွဲတွင် အမှုထမ်းပသီ ကုလား (၂၀၀၀) ၊ (၃၀၀၀) နှင့် သဘောင်္(၅)စင်း စစ်ကူလာရောက်ရာ
(၄) စင်း ၊ လက်ရဖမ်းမိသည်။သင်္ဘော အမှုထမ်း ပသီ ကုလားများကို မသတ် မညှစ်ဘဲဖမ်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ မင်းလက်တွင် ၁၆၁၅ ခုနှစ်တွင် သံတွဲ သို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာ လူသုံ့ပန့်များဖမ်းယူ ခဲ့သည်။(Thuthod
Yazawin Vol.111, p.158)
စနေမင်းလက်တွင်(၁၇၀၇) ခုနှစ်တွင် ယူတော်မူမြင်းမှူး တို့ကို ကွပ်ကဲ၍ ရခိုင်နှင့် သံတွဲ တို့ကို တိုက်ခိုက်ဟုဆို သည်။
၁၆၈၈ – ၈၉ ခုနှစ်တွင် မဒရပ်`၌ ဒု ဗ္ဘိ ကန္ဆာရ ကပ်ကြီး ဆိုက်ခဲ့သည်။ထိုဒေသမှ လူအများအပြားတို့သည်
မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်းခဲ့သည်။အင်္ဂလိပ် အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ မှတ်တမ်းတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။(D.E.Hall,
Early English Intercourse with Burma p.144
Permalink kotinmaung က December 23, 2011 – 4:13pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော် (၁၂၀၀) ခန့်ကစ၍ အုပ်စုလိုက်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးချင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းပျံ့နှံ့ဝင်ရောက် ခဲ့ပါ သည်။ သမိုင်း အထောက်အထားများအရ အစ္စလာမ်ဘာသာ
မြန်မာ နိုင်ငံသို့ စတင်ရော က်ရှိလာ ခဲ့ပုံမှာ ပြည်ပ အစ္စလာမ်သာသနာပြုများက မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် သာသနာပြု သဖြင့်
ရောက် ရှိလာခဲ့ခြင်း မျိုး မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့အစ္စလာမ်ဘာသာ ရောက်ရှိလာ ပုံနှင့်ပတ် သက်၍အောက် ပါသမိုင်း မှတ်တမ်း အထောက်အထားများအရလေ့လာသိရှိပါသည်။
အေဒီ ၁၄-ရာစုနှစ်များအတွင်း စုမားတြား၊ ဂျာဗား၊ မာလာယု ကျွန်းဆွယ်များ မှ တစ်ဆင့် အာရဗ် ကုန်သည်များသည်
မြိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေကြပြီးဖြစ်သည်။ (ဦးခင်မောင်ကြီး မြန်မာပြန်၊ မောရစ်ကော လစ်ရေး Into Hidden Burma စာ-၂
၁၁အေဒီ ၇၀၀ နှင့် ၁၅၀၀အကြား တွင် အနောက်တိုင်းမှ အာရဗ်ကုန် သည်၊ ပါရှင်းကုန်သည်နှင့် ရောမကုန်သည်တို့သည်
မိမိတို့ ပင်ရင်း တိုင်းပြညများမှ ရွက်သင်္ဘော များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ကိုလည်း ကောင်း၊ ယင်းကို
ကျော်လွန်ကာ အရှေ့ဘက် တရုတ်ပြည် ကမ်းခြေသို့လည်းကောင်း ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ရောက်ရှိခဲ့ကြ သည်။ရမ်းဗြဲကျွန်း အနီး ပျက်စီးသော အာရဗ်သင်္ဘောရှိ မွတ်စလင်မ်တို့သည် ထိုအခါက ပင် ရမ်းဗြဲ ကျွန်းတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရပေသည်။ရခိုင်ဘုရင် မဟာတိုင်စန္ဒလက်ထက်အေဒီ ၇၈၈-၈၁၀ တွင် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး
သင်္ဘော များစွာပျက်စီးခဲ့ကြောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သင်္ဘော သား များ အား ရခိုင်ပြည်မ သို့ပို့ကာ ကျေးရွာများတွင် အတည်တကျ နေရာချထား ပေးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရ၏။ မြန်မာ နိုင် ငံပင်လယ် ဆိပ်ကမ်းမြို့များဖြစ်သော ကျောက်ဖြူ၊ ပုသိမ်၊ သန်လျင်၊ မုတ္တမ၊ မြိတ် စသည်တို့တွင် အလားတူ သင်္ဘောများပျက်ပြားခြင်း ဆိုင်ရာအကြောင်း အရာများမှာအချိန် ကာလ
စောစွာ ကပင် ရှိခဲ့သည်။ မွန်နှင့်မြန်မာ ရာဇ၀င်များနှင့် အချို့သောဘုရား သမိုင်း များ တွင် သင်္ဘောပျက်စစ် သားများ၊ ကုန်
သည်များ၊ သင်္ဘောသားများအကြောင်း ရေးသား ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် အစ္စလာမ်ဘာသာ ဒါရ်ဂါ များခေါ် သူတော်စင်များ၏ ဂူဗိမာန်များက သက်သေခံနေသည်။ (၁၈၇၉-ခုနှစ် ဗြိတိသျှဘား မား ဂေဇက်ကို ကိုးကား၍ ဆရာချယ်ရေး ဗမာမွတ်စလင်မ် ရှေးဟောင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာ-၁၆) သက္ကရာဇ် ၈-ရာစုအတွင်းက ပုဂံဘုရင်ပိတ်သုံမင်းလက်ထက် သထုံ၊ မုတ္တမဒေသများသို့ အာရဗ် ကုန်
သည်များ ရောက်ရှိဝင်ထွက် သွားလာလေ့ရှိကြောင်း အာရဗ်သင်္ဘောများသည် အနောက်ဘက် ဒမတ်စတကတ် ကျွန်းမှ အရှေ့အိန္ဒိယ ကျွန်းစု များနှင့် တရုတ်ပြည်မအထိ အာရဗ်များ ခရီးပေါက်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း
တပင်ရွှေထီး လက်ထက် သက္ကရာဇ် ၈၉၇ က ဟံသာဝတီသို့ စစ်ချီရာ ပသီကုလား ပန်းသေးတို့ တစ်ဖက်မှ တိုက်ခိုက်
ခုခံခြင်း (မှန်နန်းရာဇ၀င်(ဒုတိယတွဲ) စာ ၁၈၆) အရလည်းကောင်း သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင် များ၏ ရေးသားပြုစု
ထားသော မှတ်တမ်းများအရ အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ၁၂၀၀ ခန့်မှစ၍
ရောက်ရှိ အခြေချ နေထိုင် ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်နှံ့ပုံကို လေ့လာခဲ့ရာ အေဒီ ၈-ရာစုနှင့် ၁၆-ရာစုအတွင်း ပါရှန်းနှင့် အာရဗ်သင်္ဘောများ ရေကြောင်းသွားလာခြင်းသည် အရှေ့ဖျား ပင်လယ် များ တွင် လွှမ်းမိုးခဲ့ သည်။ ၎င်းပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း များသို့
လည်း ပါရှန်နှင့် အာရဗ်ကုန်သည်တို့ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၆၆၀ တွင် အိန္ဒိယ ပြည် ၌ ရှာဂျဟန် ဘုရင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ
သားတော် ရှာရှုဂျာသည် နောင်တော် သြရန်အဇစ်နှင့် နန်းလုခဲ့ရာ အရေးနိမ့်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် စန္ဒသုဓမ္မမင်း (၁၆၅၂-၁၆၈၄)ထံ အကူအညီတောင်း ခိုဝင်လာ ခဲ့သည်။ စန္ဒသုဓမ္မမင်းအား ကတိမတည်ဟုဆိုရာ ရှာရှုဂျာက ပုန်ကန်ခဲ့ရာ ရှာရှုရျာကျဆုံးခဲ့ပြီး သူ၏ အခြွေအရံများကမန်(လေးသည်တော်)တို့အား ရခိုင် ဘုရင်၏ကိုယ်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ခန့်ထားခဲ့သည်။
၁၅၃၉ အေဒီတွင် တပင်ရွှေထီး ပဲခူးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် ၁၅၉၉ အေဒီတွင် တောင်ငူဘုရင် ပဲခူးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသော မွတ်စလင်မ်များ ၁၅၄၇ အေဒီတွင် တပင်ရွှေထီး မြို့ဟောင်းမြို့ ကို ၀င်တိုက်ခဲ့စဉ်နှင့် ၁၇၀၇ အေဒီတွင် စနေမင်း၏ အရာရှိများ သံတွဲကို တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့သော မွတ်စလင်မ်များ၊ ၁၆၁၃ အေဒီတွင် အနောက်ဘက်လွန်မင်း သန်လျင်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် သန်လျင်မြို့ ကျပြီးစအခါ ဒီဗရစ်တို၏ နောက်လိုက် မွတ်စလင် များ (သို့မဟုတ်) စစ်ပွဲပြီးစ အချိန်နှောင်းမှ ရောက်ရှိလာသော သင်္ဘောများ မမွတ်စလင် များအား ရွှေဘိုခရိုင်၊ မြေဒူး၊ စစ်ကိုင်း ခရိုင်၊ ပင်းယနှင့် ခံလူး၌လည်းကောင်း၊ ကျောက်ဆည် ခရိုင်လက်ပံ၌လည်းကောင်း၊ ရမည်းသင်း
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် အာရဗ်သင်္ဘောများပျက်၍ ၀င် ရောက် နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အာရဗ်ပါရှန်ကုန်သည်များ ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေး စခန်း များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ရေကြည်ရာမြက်နုရာသို့ရွေှ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြင့် လည်း ကောင်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၁၉၉၃-ခုနှစ် ကောက်ယူရရှိသည့် သန်းခေါင်း စာရင်းအရ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ် တိုင်းများတွင် လူဦးရေ ၁၆,၂၀,၂၃၃ ဦး ရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၃ ဒဿမ ၇၉ % မျှရှိလေသည်။
အစ္စလာမ်ဘာ သာဝင်များ တစ်နေ့ ငါးကြိမ်ဝတ်ပြုနိုင်ရန် ရန်ကုန်မြို့တွင်ဗလီကျောင်း ၁၇၁–ကျောင်းနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဗလီဝတ်ကျောင်းပေါင်း ၂,၂၆၆ ခန့်ရှိပါသည်။
Permalink kotinmaung က December 24, 2011 – 1:02pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အိန္ဒိယတွေးခေါ်ပညာရှင် Allama Dr. Iqbal သူ့ကိုသူပြောခဲ့တဲ့ အမျိုးသားစိတ် နိုးဆွပေးသောကဗျာ
sach khe doon eye borhaman ! ahgor too bura nama nea
teeri sanam kadoon ke boot hogeyi pura nae
pattor ki mooro too mae sumja hae to khuda hae
khak waton ka mujko her zarrha dewata hae
အိန္ဒိယတွေးခေါ်ပညာရှင် Allama Dr. Iqbal မိမိ လူမျိုးကို တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်နိုးဆွပေးခဲ့
သောကဗျာ ထဲ တစ်ပိုဒ် ခွဲထုတ်၍ ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
အိန္ဒိယတွေးခေါ်ပညာရှင် Allama Dr. Iqbal သည် ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏ အနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။သူ့ကို သူ
လက်ညိုးထိုးပြောဆိုကာ ကိုယ်လူမျိုး ကို အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲရန် ၊ကိုယ်လူမျိုး၏ လွတ်လပ်ရေးအ
တွက် ရေးသားခဲ့သော ကဗျာ မှာ အလွန်သင်္ခန်းစာယူဖွယ်ဖြစ်၍ ဤနေရာတွင်မျှဝေပါသည်။
အိန္ဒိယတွေးခေါ်ပညာရှင် Allama Dr. Iqbal သူ့ကိုသူပြောနေတာက
အိုဗြဟ္မဏ ! တကယ်လို့ မင်းစိတ်မဆိုးခဲ့ ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် အမှန်အတိုင်း ဘဲ မင်းကို ပြောပြတော မယ်။
မင်းစိတ် ရဲ့ စိတ်နှလုံးသားထဲမှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ ရုပ်ထုတွေဟာ ဟောင်းနွမ်းကုန်ပြီ။ကျွန်တော်က အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေကိုလည်းစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ဘုရားကျောင်းတော်လည်းစွန့် လွှတ်ခဲ့ပြီးပြီ။တရား
ဟောဆရာ၏ တရားစကားတွေလည်း စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဆက်ပြီင်္းပြောခဲ့တာက –
ဒီနိုင်ငံ ၏ သဲတွေအားလုံး တစ်ပွင့်ချင်း တစ်ပွင့်ချင်း ဒေဝတာ လို ဘဲ သဘောထားတယ်။ တန်ဖိုးထား တယ်။
ဒီကဗျာ လည်းနှင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်း ကိုယ့်လူမျိုးလွတ်လပ်ရေး အတွက်နိုးဆွ ပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ ကို
ကျွန်တော် တို့ မွတ်ဆလင်တွေ အားလုံး အိပ်မော ကျနေရာမှ နိုးနိုင်ပါစေ။
Permalink kotinmaung က December 24, 2011 – 5:03pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
၁၂၇။ – ဗမာမွတ်ဆလင် (The Muslims of Burma )
ဘာသာပြန်ဆိုသည်ကို ဖတ်ရန် လင့်
Between integrationand secession:
the Muslim communities of the southern .
Written by Dr.Moshe Yegar
မူရင်းစာအုပ် ကိုဖတ်ရန် လင့်
ကိုကျော်ကျာ်ဦးဗမာမွတ်ဆလင် ဝပ်ဆိုဒ်သို့သွားရန် လင့်
http://kyawkyawoo. wordpress. com/about/
Permalink kotinmaung က December 25, 2011 – 10:17am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
မင်းအမည် တွေရှိပြီး(ခုသက္ကရာဇ်)မရှိသောအခါသက္ကရာဇ် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်
မြန်မာ မင်းဆက်များကို ဤနေရာတွင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Jump to: အညွှန်း, ရှာဖွေရန်
မြန်မာနိုင်ငံ မင်းဆက်များ ပထမတကောင်းမင်းဆက်၊ ဒုတိယတကောင်းမင်းဆက်၊ သရေခေတ္တရာပထမမင်းဆက်၊ သရေခေတ္တရာဒုတိယမင်းဆက်၊ ပုဂံမင်းဆက်၊ ပင်းယမင်းဆက်၊ စစ်ကိုင်းမင်းဆက်၊ မဂဒူး မင်းဆက်၊အင်းဝမင်းဆက်၊ တောင်ငူမင်းဆက်၊ မွန်မင်းဆက်၊ ရခိုင်မင်းဆက်၊ ညောင်ရမ်းမင်းဆက်၊ ကုန်းဘောင် မင်းဆက်
ထင်ရှားသော မင်းများ ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်း၊ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ အလောင်းစည်သူ၊ ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ၊သတိုးမင်းဖျား၊ ၀ါရီရူး၊ ရာဇာဓိရာဇ်၊ ပထမမင်းခေါင်၊ ရှင်စောပု၊ ဓမ္မစေတီ၊ ရွှေနန်းကျော့ရှင်နရပတိ၊ သိုဟန်ဘွား၊ တပင်ရွှေထီး၊ဘုရင့်နောင်၊ နတ်သျှင်နောင်၊ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီး၊အနောက်ဖက်လွန်မင်း၊သာလွန်မင်း၊ အလောင်းမင်းတရား၊ ဆင်ဖြူရှင် ၊ဘိုးတော်ဘုရား၊ မင်းတုန်းမင်း၊ သီပေါမင်း
အကြောင်းအရာများ သက္ကရာဇ်၊ တျံတြစ်အယူဝါဒ၊သရပါတံခါး၊ မြစေတီကျောက်စာ၊ ကာချင်း၊ ရာဇာဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း၊ အင်းဝ-ဟံသာဝတီ အနှစ်လေးဆယ်စစ် ၊ ရတု၊ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ၊ ကမ္ဘောဇသာဒီ နန်းတော်၊ မဟာရာဇဝင်ကြီး၊ သာလွန်မင်းလက်ထက် အမိန့်ပြန်တမ်းများ၊ မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်း၊ ပန်းထိမ်းမင်းသား အရေးအခင်း၊ ပဉ္စမအကြိမ် သံင်္ဂါယနာတင်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲများ၊ ပါတော်မူခြင်း၊
ဒေသများ တကောင်း၊ မြောက်ဦး၊ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ၊ ဟန်လင်း‎၊ သထုံ၊ ပုဂံ၊ပင်းယ၊ စစ်ကိုင်း၊ အင်းဝ၊ မုတ္တမ ၊ဟံသာဝတီ၊ တောင်ငူ၊ ရွှေဘို ၊ အမရပူရ၊ မန္တလေး
တကောင်းခေတ်၊ ပျူခေတ်၊ ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်၊ တောင်ငူခေတ်၊ ညောင်ရမ်းခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်၊ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်၊ န၀တခေတ်
Permalink kotinmaung က December 25, 2011 – 10:31am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပုဂံခေတ် ကျောက်စာအချို့တွင် ပန်သိယ် ပန်းသေးကိုတွေ့ရသည်။
(Inscription of Burma Vol.1 , 76 . sated 1224 AD)
ဟံသာဝတီဆင်ဖြူရှင်မင်းလက် သူတစ်ပါးအသက်သတ်၍ဆောင်ရွက်ရသော ဘာသာရေး
ဓလေ့လုပ်ငန်းများကိုပိတ်ပင်ခဲ့ရာတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့၏အီဒွလ်အဒွဟာနေ့(ဘက္ကရီအစ်နေ့)
သားကောင်များ သတ်ဖြတ် စွန့်လွှတ်သည့်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ ပိတ်ပင်ခြင်းရသည်။
(D.E.G Harvey Outline History of Burma p. 114)
Permalink kotinmaung က December 25, 2011 – 10:45am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကမ္ဘာ အရှေ့ပိုင်း ပေါ်တူဂီကြီင်္စိုးလာပြီးနောက် ရခိုင်မင်းလက်ထက် ကြေးစားစစ်သားအဖြစ်အမှုထမ်းသူတို့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလည်းပါဝင်သည်။၎င်းတို့သည် အစ္စလာမ်ဝင် ရခိုင် ဘင်္ဂလားသားတို့နှင့် ပေါင်းစုံမိသည်။ ထိုမှ တဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက် လာကြသောအခါ ပေါ်တူဂီတို့နှင့် အတူကြေးစားအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်စစ်သားများပါလာ
ခဲ့သည်။ မင်းတရားရွှေထီး ၊ ဘုရင့်နောင်၊ တို့လက်ထက်တွင် အမှုထမ်းကြသော ကြေးစားစစ်သည် သင်္ဘောသားကုလား
( G.E. Harvey Outline History of Burma 114 )
Permalink kotinmaung က December 25, 2011 – 11:00am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
(ပုဂံမင်းဆက်များ) KINGDOM of PAGAN
Pyinbya (ပျဉ်ပြားမင်း) c.900-c.925
Tannet (တံနက်မင်း) c.925-c.950
Nga Khwe (စလေငခွေးမင်း) c.950-c.955
Theinkho (သိန်းခိုမင်း) c.955-c.970
Ngyaungusaw Rahan (ညောင်ဦးစောရဟန်းမင်း) c.970-c.995
Kwonsaw Kyung Phyu (ကွမ်းဆော်ကြောင်ဖြူမင်း) c.995-c.1014
Kyitso (ကြည်စိုးမင်း) c.1014-c.1020
Tsukkata (စုက္ကတေးမင်း) c.1020-1044
Anawrahta (အနော်ရထာမင်း) 1044-1077
Sawlu (စောလူးမင်း) 1077-1084
Kyanzittha (ကျန်စစ်သားမင်း) 1084-1113
တရုတ်ပြည်ကို သံစေလွှတ်ပါတယ်။ embassy to China, 1106
Alaungsithu (အလောင်းစည်သူ) 1113-1167
Mengshengtsau (မင်းရှင်စော) 1167
Narathu I (နရသူမင်း) 1167-1170
Narathenkha (နရဿင်္ခမင်း) 1170-1173
Narapatisithu (နရပတိစည်သူ) 1173-1210
Nantonmya (နားတောင်းများ) 1210-1234
Kyaswa (ကျော်စွာ) 1234-1250
Uzana (ဥဇနာမင်း) 1250-1254
မွန်ဂိုတာတာများ ပုဂံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်။ Mongols loot Pagan, 1287
Kyawswa (ကျော်စွာ) Mongol Vassal,
Sawahnit (စောနှစ်) 1298-1325
ပင်းယနှင့်ပူးပေါင်းသည်။ Combined with Pinya
ပင်းယမင်းဆက် KINGDOM of PINYA
Athinhkaya (အဿင်္ခယာ) 1298-c.1312
Yazathinkyan (ရာဇသင်္ကြန်) 1298-c.1312
Thihathu (သီဟသူ) 1298-1324
Uzana II (ဥဇနာ) 1324-1343
Ngashishin (ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ) 1343-1350
Kyanswange (ကျော်စွာငယ်) 1350-1359
Narathu II (နရသူ) 1359-1364
Uzana Pyaung (ဥဇနာပြောင်) 1364
အင်းဝမင်းဆက် KINGDOM of AVA
Thadominbya (သတိုးမင်းဖျား) 1364-1368
Minkyiswasawke (မင်းကြီးစွာစော်ကဲ) Chinese Vassal,
Tarabya (တရဖျား) 1401
Nga Nauk Han (ငနက်ဟန်) usurper,
Minhkaung I (မင်းခေါင်) 1401-1422
Thihathu (သီဟသူ) 1422-1426
Minhlange (မင်းလှငယ်) 1426
In World War II, Burma ended up conquered and occupied byapower that previously had had nothing to do with Burmese history — Japan. The Japanese may have done this to cut off supplies to China over the famous “Burma Road.” It also put them on the border of India, where enemies of Britain, from Napoleon to Hitler, had always dreamed of being. To supply their position in Burma, the Japanese employed prisoners-of-war to builtarailroad from Thailand. Many, many died in this project, immortalized in the movie, Bridge on the River Kwai . But by the time the Japanese got around to invading India in 1944, they were well past their prime; and the army that was sent, and defeated, didn’t even have enough supplies to makearegular retreat. The British reconquest of Burma was then set in motion. Directing that operation was Louis Mountbatten, who was subsequently made Earl Mountbatten of Burma. Mountbatten then served as the last Viceroy of India. Onlya“life peerage,” there are no subsequent Earls of Burma running around.
Permalink kotinmaung က December 26, 2011 – 3:08pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အနောက်ဖက်လွန်မင်း လက်ထက်(၁၆၁၅- ၁၆၂၈)
အနောက်ဖက်လွန်မင်းလက်တွင် ဇင်းမယ် ကုလားပသီ ပီရာမဟာမက် ဆိုသူမှာ နိုင်ငံသံတမန်များအား ကြိုဆို၍
ဘုရင့်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ ပို့ ရသူဖြစ်ကြောင်း(၁၆၁၆) ခုတွင် သိရသည်။ (Thuthodhita Yazawin Vol.111 , p.159 )
သာလွန်မင်းတရားလက်ထက် (၁၆၂၉- ၁၆၄၈)
၁၆၄၁ ခုတွင် အက္ကပတ်မင်း၏ သံမိတ်စား မဟာမက် ရောက်ရှိလာသောအခါ ရာဇသံ ကိုကူးရသူတို့မှာ ဇင်းမယ်
ကုလားသတိယန်သိန်(စဒစ်ယာစင်) နှင့် စန္ဒကမာ (စန္ဒကမရ်) တိုဖြစ်၍ ရှေ့တော်မှောက်တွင် အကူအညီအဖြစ်နေ
ရသူမှာမနာဝါရေ (မိုနဝါရ်) ဖြစ်သည်။ ရှေ့တော်မှောက်တွင် စန္ဒကမာရ် က ကုလားစာ (ပါရှန်စာ)နှင့် မြန်မာ စာကိုဖတ်ရသည်။ (Thuthodhita Yazawin Vol.111 , p.213 , 214 )
စနေမင်းလက်ထက် (၁၆၉၈- ၁၇၁၄) တွင် ကုလားဝန် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင် သိရသည်။(၁၇၀၆) ၊(၁၀၆၈)
တပို့တွဲ လပြည့်ကျော် (၅) ရက် ဘွဲ့အမည် များဖြင့် ချီးမြင့်တော်မူရာ ကုလားဝန် နွားလှစား မဏိသူရ ဘွဲ့ အမည်
ကို ရရှိခဲ့သည်။ ( Ibid , p.316)
ပုဂံခေတ် အစော ပိုင်းကာလ ပိတ်သုံမင်း (အေဒီ ၆၅၂ – ၆၆၀) လက်ထက်တွင် အာရဗ် ကုန်သည်တို့သည်
သထုံ မုတ္တမ အစရှိသော ဆိပ်ကမ်းများသို့ရောက်ရှီကြလေသည်။အာရဗ် သင်္ဘော များသည် အနောက်ဖက်
မဓဂစကာကျွန်းမှ အရှေ့အိန္ဒိယ ကျွန်းစုများနှင့် တရုတ်ပြည်အထိ သွားလာလျှက် မြန်မာပြည်သို့ ဝင်ထွက်
ခြင်းပြုခဲ့သည်။ (ဦးကြည် B.A ရာဇဝင် ဂုဏ်ထူး) ၊(မြန်မာရာဇဝင် သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာ) ၊မန္တလေး
ပိဋကတ်တော် ပြန့်ပွားရေး – ၁၉၅၀)
Permalink kotinmaung က December 26, 2011 – 3:29pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၏ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှ…
၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၌ ကျင်းပခဲ့သော ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ လူထုအစည်း အဝေး ပွဲကြီး သို့ အမျိုးသားတပ်ပေါင်းစုအသွင်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်၊ ဦးဖေခင်၊ ဦးခင်မောင်လတ်တို့ ဦးဆောင်သည့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗမာမွတ်စလင်မ်ကွန်ဂရက် (ဗမက) လည်း အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ ထိုညီလာခံသဘင်ကြီး၌ ဖဆပလအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ဆရာကြီးဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုအမှတ်(၆) တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဆိုအကြောင်းကို ၄၊ ၂၊ ၁၉၄၆ ရက်စွဲထုတ်ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ (စာလုံးပေါင်းအား မူရင်းစာသားအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။)
“ ကျွန်တော်၏ စာဆို စတုတ္ထပိုင်းကတော့ ဗမာမူဆလင်များနှင့် ပတ်သက်ပါတယ်။ ဗမာမူဆလင် များဟာ ရှေးက ဗမာများနှင့် အယူဘာသာခြားရုံနှင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို နိုင်ငံခြားသားများ စာရင်းတွင် သွတ်သွင်းကာ ဗမာနိုင်ငံရေးတွင် မပါဝင်ဘဲ လျစ်လျူရှု ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုစီးပွားရေး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအစစမှာ ဗမာတို့ နှင့်ခွဲလို့ မရသော မြန်မာလူမျိုးများပင် ဖြစ်နေကြောင်း၊ အယူမှန် အမြင်မှန်သို့ ရောက်ရှိလာကြသည့် အတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗမာမူဆလင် ပျဉ်းမနားကွန်ဖရင့်ကြီးက ငါတို့သည်ဗမာများ ပင်ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ကို ဤညီလာခံကြီးက အထူးချီးကျူး ၀မ်း မြောက် ကြောင်း၊ ဤသို့သဘောထားကြသော ဗမာမူဆလင်များကို တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု တို့ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများကိုပေးရန် သဘောတူကြောင်းဟူသော အဆိုဖြစ်ပါတယ် ””။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်တော် ပြောလိုသည့်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို သွေးခွဲသူမှာ နယ်ချဲ့စနစ် ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်၌ သက်ဦးဆံပိုင်မြန်မာဘုရင်များ အုပ်စိုးစဉ်က လူနည်းစုံ များကို မနှိမ်ခဲ့ပါ။ ကုလားလူမျိုးများထဲမှ မူလာအီစမေလ်သည် မြန်မာဘုရင်ထံတွင် အမှုတော် ကို ထမ်းရွက်သောအခါ ဘောဂသေဋ္ဌိ သူဌေးဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခဲ့သည့်ပြင်၊ ကျောက်ရဲမြို့ကို အပိုင် စားပေး၍ အထောက်တော်ဝန် ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါမှစ၍ ၎င်းတို့၏ အဆက် အနွယ်များသည်၊ မြန်မာထီးနန်းထုံးတမ်းစဉ်လာယဉ်ကျေးမှုများကို လိုက်နာကျင့် သုံးစွဲ ခဲ့ကြခြင်း ဖြင့် အယုဘာသာမျှသာ ကွာခြားသော ဗမာလူမျိုးများဖြစ်လာကြပါသည်။ မြန်မာပြည် တွင် မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး သီပေါမင်းတရားကြီးလက်ထက်မင်း(၂)ဆက်တွင် စောင်းနှင့် အမှုတော် ထမ်းခဲ့ရသော စောင်းဆရာကြိး ဒေ၀ဣန္ဒာ၏ တပည့်ရင်းမှာ မူလာ အစ်စမေလ်တို့၏ အနွယ်အဆက် စောင်းဆရာကြီး မောင်မောင်လတ် ဟူသော ဗမာမူဆလင် ပင်ဖြစ်၍ ယခု မန္တလေးတွင် ထင်ရှားရှိနေပါသည်။ မြန်မာစောင်းပညာကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထံမှ သင်ယူလေ့လာကြရပါသည်။ ထိုမှတစ်ပါး မဟာဂီတကျမ်းဝင် ရွှေနားတော် သွင်းဖြစ်သော မြန်မာရှေးသီချင်းကြီးများကို ကောင်းစွာ တက်ကျွမ်းကြသော ကျိုက်လပ် ဦးအီစမာအင်၊ ကြည့်မြင်တိုင် ဦးဘူးတား၊ ဟင်္သာတ ဦးဘအိုစသော ဂီတပါရဂူတို့မှာ ဗမာမူဆလင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဗမာမူဆလင်တို့မှာ ဤသို့ပင် ဗမာ့အလှယဉ်ကျေးမှုများကို လေ့လာလိုက်စား ခဲ့ကြခြင်းဖြင့်ပင် ဗမာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံကြီး ထင်ရှားလှပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးတို့၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲကား ဘာသာရေးမဟုတ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး သက်သက်မျှ ဖြစ်ပါသည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ကား ဘာသာတရားအရ လက်ထပ်ရပါ သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွံတေးမြို့၌ ခေတ္တနေစဉ်က ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ရသော ၀မ်းမြောက်ဖွယ်တစ်ရပ် ကို အစီရင်ခံလိုပါသည်။ မူလာအစ်စမေလ်၊ မူလာဒါဝတ်တို့၏ အဆက်အနွယ် များဖြစ်သော ဗမာမူဆလင်လက်ထပ်ပွဲတစ်ခုတွင်၊ နံနက်ပိုင်း၌ မူဆလင် ဘာသာတရားပညတ်ချက်အရ လက်ထပ် ပြီးစီးသော အခါ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မြန်မာတို့ ထုံးတမ်းအရ အမျိုးသမီးကလေးမှာ ဗမာထဘီ အင်္ကျီလက်ရှည် ဆံမြိတ်ချနှင့် သတို့သားမှာလည်း ပုဆိုးတောင်ရှည်၊ ရင်ဖုန်းအင်္ကျီခေါင်းပေါင်းနှင့် ၀တ်ဆင်လျှင် မြန်မာပီပီပွဲထုတ် ဧည့်ခံကျွေးမွေးထိမ်းမြာခြင်းပြုသဖြင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် ၀မ်းမြောက် ၀မ်း သာ သြဘာစာများ ဘတ်ကြားချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဗမာမူဆလင်များသည် မိမိတို့သည် ဗမာလူမျိုးများပင်ဖြစ်သည်ဟု အမြင်မှန်ထားကြသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ကလည်း မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဤညီလာခံကြီးက ကြွေးကြော်လိုက်ပါ သည်။
(ကိုးကား – အံ့ဖွယ် အက္ကဆာကျောက်ဖျာနှင့် အစ္စလာမ့်သုတ မဂ္ဂဇင်း)
Credit : http://news.mmsy.info/news/1577
Permalink kotinmaung က December 27, 2011 – 11:42am တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ခရစ်သက္ကရာဇ် ( ၁၈၂၃ ) ခုနှစ် မတိုင်မီက
(1 ) ဦးလှဒင်မြန်မာဘာာပြန်ဆိုသောရတနာရွှေမြေ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၅၀ တွင် ရှေး ဟောင်း သုတေ သနကျောက်စာ လိုက်စားသူတို့က သိရိဂုတ္တရတောင်ကုန်းသည်တစ်ခါက တည်ရှိခဲ့ဘူးသော ဓညဝတီမြို့ဟောင်း၏အရှေ့မြောက်ဖက် တွင်တည် ရှိကြောင်းထိုမြို့တော်၏မြို့ရိုးဟောင်းများကိုယခုတိုင်တွေ့မြင်ရ သဖြင့် ထိုမြို့ရိုးကို အေဒီ ၁ ရာစုထက်စော၍ တည်ထောင် ခဲ့သော
အိန္ဒိယ ကုလား မြို့တော် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းစသည်တို့ကို ကျောက်စာ အထောက် အထားများ အကိုးအကား များ စွာ ဖြင့်ပြကြ
မြောက်ဦးမြို့၏ထူးခြားချက်ကား ကုလားမွတ်ဆလင်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း ကလည်း အ ဆန်း မဟုတ်ပေ။ ဒုတိယမြောက်ဦးခေတ်တွင် ဘင်္ဂလား ၁၂ ပြည်နယ်ကို ပြန်လည် တိုက် ခိုက် သိမ်း ပိုက် ရာ`၌ စစ်သူကြီးဓမ္မဇေယျသည်
ကုလားပြည်မှ ကုလားဘုရင်နှင့်တကွ သုံ့ပန်းတို့ကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ရာတွင် ကုလား (၁၀၀၀၀) ကို ဆင်စာမြင်းစာရိတ်အစု၊ ကုလား
(၂၀၀၀) ကို ဝါးခုတ်၊သစ်ခုတ် အစု၊ ကုလား (၁၀၀၀) ကိုလယ်လုပ်၊ ကုလား(၁၀၀၀၀) ကိုဟင်းသီးဟင်ရွက်၊ ငရုတ်၊ကြက် သွန်၊
ကွမ်း ဆက်အဖွဲ့အစု ကုလား (၂၀၀၀) မိဖုရား၊သားတော်၊ သမီးတော်များ၊ အိမ် ၌ ရေခပ်၊ထင်းခွဲ၊ ကုလား (၂၀၀၀) လေးကိုင်း
စစ်သည်၊ ကုလား (၁၀၀၀) ရက်ကန်းရက် ၊ကုလား (၁၀၀၀) ယာဉ်ထမ်း၊ က်ုလား(၁၀၀၀)ဆားချက်၊ကုလား(၁၀၀၀)မြို့တွင်း
မြို့ပြင် အမှိုက် ကျုံး၊ သန်ရှင်းရေး စသည်ဖြင့် ကုလားစုစုပေါင်း (၄၇၅၀၀) ဦး ဖမ်းဆီးလာကာတာဝန်ခွဲဝေ အပ် နှင်း ပေးခဲ့ သည် ဟုရေးသား ဖေါ်ပြ ထားသည်။(စာ ၂၅၇–၂၅၈)
(ကိုးကား ။ ။ကစ္စပနဒီမှ ဓညဝတီသစ္စာ – ၂၀၀၈ ခု၊စာပေဗိမာန်ဆုရ စာအုပ်)(သုတပဒေသာ – ဝိဇ္ဇာ)ဆုရ။ ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ။(စာရေးသူ ကလောင်အမည် မောင်မိုးယံ ၊ မူရင်းအမည် ဗိုလ်မှူးမျို့သန့်(ငြိမ်း)။စာပေဗိမာန် စာတည်းမှူးက မှတ်ပုံအမှတ် ၀၇၄၉၂ ဖြင့် ပုံနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၃၉၁၁ ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။)
ရမ်းဗြဲ တောင်ကျောင်းဆရာတော် ရေး ရခိုင်ရာဇဝင်သစ် ပထမအုပ်စတုတ္ထတွဲ ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃ မို့တွင်
ငနှလုံမင်း(၁၂၃၄ – ၁၂၃၇)လက်ထက် ကုလားပြာည်ကိုစစ်ထိုးရာ သုံ့ပန်းအဖြစ် (၄၇၅၀၀) ဦး ခေါ်လာပြီး မင်းသုံး၊
မိဖုရားသုံး၊ မင်းသားသုံး၊မင်းသမီးသုံး မှူးမတ်သုံး အတွက် အသီးသီး အစုနှင့် ခွဲတော်မူသည်။ ဤကားဓညဝတီ
Francois Bernier ၏မှတ်တမ်းနှင့် Father Delaunoite ၏ Catholic encyclopedia အရ ၁၆၂၁ မှ ၁၆၂၄ ခှုနှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူများမှာ (၄၂၀၀၀) လေးသောင်း နှစ်ထောင် ရှိ သည်ဟု ဆို၏ ဆာအာသာဖယ်ယာက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် လာသူ ဦးရေး သည် ရခိုင်ပြည် စုစုပေါင်း လူဦး ရေး၏ ၁၅ % ရှိသည် ဟု ဆိုထားသည်။ ရခိုင်ဘုရင်
ကထိုဖမ်းဆီးယူလာ သော လူထဲတွင် အတတ်ပညာ ရှင် ဖြစ် သူ လေးပုံတစ်ပုံ ခန့်ကိုယူ ထားပြီး ကျန်လူများကို တစ်ဦး
လျှင် (20 Rs မှ 70 Rs ဖြင့် )ဈေးတင် ရောင်း ချ ခဲ့သည်။ ထိုဖမ်းဆီးကျွန်များကို လက်ဖဝါးဖေါက်ပြီး ကြိမ်လုံးဖြင့်ချည်
နှောင်ကာ ကြက်၊ငှက် ကဲ့ သို့ သင်္ဘော ကုန်တွင်း ထဲ ထည့်သွင်းပြီး သယ်ဆောင် လာခဲ့သည်ဟုဆို၏။(Harvey,Outline
of Burmese History Page, 94 )
မင်းဘာကြီး ခရစ်ဝက္ကရာဇ်(၁၅၃၁ – ၁၅၅၃) နှင့် မင်းရာဇကြီးတို့ လက်ထက် က သောင်းထီး ကျွန်းမှ
ကုလားလေးထောင်စီ ဖမ်းဆီးခေါ်လာခဲ့ကြောင်း၊ မင်းရာဇာ ပဲခူးသို့ စစ်ချီခဲ့ ရာတွင် ကုလား မွတ်ဆလင် သူရဲကောင်း
၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်း) သားတော် အိမ်ရှေ့ မင်းသား မင်းခ မောင်း ပိုမော်တင် ချောင်း၊ သံလျှင်မြို့သို့ စစ်ချီလေသည်ဟု
မောရစ်ကောလစ်ရေး ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ ၁၂ တွင် (ထို့ကြောင်းရခိုင်ပြည် သည် ပထမနှစ် (၁၀၀၀) အတွင်း
ကုလားမင်းများ အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်) ဟူ၍လည်းကာင်း၊စာမျက်နှာ (၁၃) တွင် ခရစ် ၉၅၇ ခှုစ် နောက်ပိုင်းတွင်
ရခိုင်ရာဇဝင် စတင်ခဲ့တောသည် ) ဟု လည်းကောင်း စံရွှေပု ကဆိုသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊စာမျက်နှာ ၂၁ တွင် ခရစ်နှစ်
၉၅၇ မတိုင်မီက ရခိုင်ပြည်သည် ကုလား ပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ခဲ့ သည်ကတော မှန်ပေ၏ ဟူ၍ လည်းကောင်း – စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည် ။
ရခိုင်ပြည်ကို ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များက အေဒီ ၁ ရာစုမှ ၁၁ ရာစု အထိ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်စိုးမိုး အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားသည်။
အထက်ပါစာအုပ်၏နောက်တစ်နေရာတွင် တရံရောအခါ စစ်တွေကျွးန်ကုလားတို့ကို ဓါးပိုင် ကြီး သောက်ကြယ်
က ခေါ်၍ ဆုလာဘ်ပေးကြောင်း ၊မင်းမသိအမတ် မြို့သစ်စား ရွှေသဲ သိစေလျှင် ထို အကြောင်း ကိုလျှေက်ထား လေသော်
ဟုပါရှိရာ (ပြည့်ရှင်မင်းမဟာရာဇာ လက်ထက်) စစ်တွေမှာ ထိုစဉ် ကပင် ကုလားမွတ်ဆလင်များ ရှိနေကြောင်းထင်ရှားနေသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားစာရေးဆရာများ၏အထက်ပါမှတ်တမ်းများအရ ထိုစဉ်က မူဆလင် ဦးရေ အများ အပြားရှိသည်
ကိုခန့်မှန်း နိုင် သည်။ ဤ အရပ်ရပ် မူဆလင်များသည် ရှူးဂျား မင်းသား ၁၆၆၀ ခုနှစ်ရခိုင် သို့ခိုလှုံလာသည့် ကာလ ထက်
အချိန်ကာလ အားဖြင့် စော နေကိုတွေ့ရသည်။ရခိုင်ဘုရင် လေးသည် (ကမန်)တပ်ဖွဲ့ဝင် ရှားရှူးဂျား မင်းသား နောက် လိုက်များထက် ရှေးကျသူများဖြစ် သည်
ရခိုင်ဒေသတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်ဟုဓညဝတီဆရာ တော် ဦးညာဏ၏
ရခိုင်ရာဇဝင် ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၁၆၁- ၁၆၂) `၌လည်း ကောင်း၊ ဦးကြည် မြန်မာ သမိုင်း စာမျက်နှာ (၁၆၀ )`၌လည်း
ကောင်း ဦးလှထွန်းဖြူ ၏ ငွေစကားရည်လုပွဲစာအုပ် စာမျက်နှာ (၄၇) တွင် လည်း ကောင်းရေးသား ဖေါ်ပြထားသည် ကို
Maurice Collis ရေးသော The Land Of the Great Image အား ဦးလှဒင်က ရွှေရတနာ မြေ အမည်ဖြင်ပြန်ဆို ရေးသာဘာသာပြန်ဆုရစာအုပ်၏ စာမျက်နှာ (၁၉၁) တွင် အေဒီ ၆၃၀ ခုနှစ် က ရခိုင်ပြည် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ပါဝင်ခဲ့၍ နေထိုင်သောလူမျိုးများမှလည်း ဘင်္ဂလား ပြည် မှလူမျိုး များ နှင့်အသွင် တူကြ သည်။ ထိုနည်းတူဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်မျိုးစလုံးပြိုင်တူထွန်းကားခဲ့ သည့်အထောက် အ ထား များ ရှိသည်ဟုဖေါ်ပြသည်။
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင်အထူးသဖြင့်ပါကိစ္စတန်နှင့်ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အများစု သည်အစ္စလာမ်ဘာသာ
ဘာသာဝင်အများစုမှာအစ္စဘာသာသို့ကူးပြောင်းကိုး ကွယ်လာကြသည်။ ထိုသူများမှာရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်ကပြည်သည်ဘင်္ဂလားသစ္စာတော်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ဘင်္ဂလား(၁၂)မြို့ခေါ် ဘင်္ဂလား ဒေသ သည်
ရခိုင်ပြည်၏ အင်ပါယာအဖြစ်သို့လည်းကောင်း အပြန်အလှန်ကျရောက် ခဲ့ကြကြောင်း History Of Burma နှင့်သမိုင်း
စာအုပ်များ တွင်ဖေါ်ပြထား သည်ကိုတွေ့ရသည်။
၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို ဗမာ ဘုရင် သိမ်းပိုက်
သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်သည် ဘင်္ဂလားဒေသရှိ ဂေါလ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ်ကကောင်း
မွန်စွာလက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလား ဂေါလ် ဆူလတန်ဘုရင်၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ထီးနန်းကို အရယူခဲ့ရသည်။ အေဒီ ၁၄၃၀-တွင်
မြောက်ဦးမြို့တည် ၍ မြောက် ဦးခေတ် ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ဦးခေတ်တွင် ရခိုင့် တပ်မတော်၌ အာရဗ်
်မှစစ် သည်တော်များ၊ ဥရောပမှ ပေါ်တူဂီများနှင့် ဂျပန်တို့ပါ အမှုတော်တမ်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရ သည်။ ယင်းအာရပ်မှစစ်
သည်တော်မျိုးဆက် အများစုမှာ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် မြောက်ဦးမြို့ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် နေထိုင်ကြ ပါသည်။ ယင်း
တို့ကို ရခိုင်တို့က ကမန်ဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး ရခိုင်ပြည်၌ တိုင်းရင်း သား မျိုးနွယ်စု အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြု ထားပါသည်။
ယင်းမူဆလင် ဘာသာဝင် ကမန်တို့သည်ရခိုင်ပြည် ၌ ပြဿနာ ဖန်တီးခြင်း၊ ရခိုင်တို့နှင့် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးခြင်းမျိုးကို လုံးဝပြုလုပ်ခြင်း မရှိဘဲ၊ ရခိုင်ပြည် နှင့်ရခိုင် လူမျိုး အပေါ် သစ္စာရှိရှိဖြင့် ရခိုင်
တို့နှင့် အေးအတူ ပူအမျှ ငြိမ်းချမ်း စွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသော ကမန်လူမျိုး တစ်မျိုးများရှိသကဲ့သို့ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့
သော ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အစ္စလာမ် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ကြသောလူတစ်စု လည်းရှိ နေသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်နှံ့ပုံကို လေ့လာခဲ့ရာ အေဒီ ၈-ရာစုနှင့် ၁၆-ရာစု အတွင်း ပါရှန်း
နှင့် အာရဗ်သင်္ဘောများ ရေကြောင်းသွားလာခြင်းသည် အရှေ့ဖျား ပင်လယ်များ တွင်ပင် လယ်များတွင် လွှမ်းမိုး ခဲ့သည်။
၎င်းပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း များသို့ လည်း ပါရှန်နှင့် အာရဗ်ကုန်သည်တို့ အခြေ ချ နေထိုင်ခဲ့သည်။ အေဒီ
၁၆၆၀ တွင်အိန္ဒိယ ပြည် ၌ ရှာဂျဟန် ဘုရင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ သားတော် ရှာရှုဂျာ သည် နောင်တော် သြရန်အဇစ်နှင့်
နန်းလုခဲ့ရာ အရေးနိမ့်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် စန္ဒသုဓမ္မမင်း (၁၆၅၂-၁၆၈၄) ထံ အကူအညီတောင်း ခိုဝင်လာခဲ့သည်။
စန္ဒသုဓမ္မ မင်းအား ကတိ မတည်ဟုဆိုရာ ရှာရှုဂျာက ပုန်ကန် ခဲ့ရာ ရှားရှုဂျား ကျဆုံးခဲ့ပြီး သူ၏ အခြွေအရံများ ကမန်
(လေး သည်တော်)တို့အား ရခိုင် ဘုရင်၏ကိုယ်ရံတော် တပ်ဖွဲ့ ခန့်ထားခဲ့သည်။
စန္ဒ၀ိဇယ (၁၇၁၀-၁၇၃၁)လက်ထက်ကျမှ ထိုကမန်တို့အား နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။ များစွာ သော ကမန် တို့အား ရမ်းဗြဲ
ကျွန်း၊စစ်တွေအနီး သင်းဂနက်၊ သာယာကုန်းကျေးရွာများသို့ ပို့ထားခဲ့သည်။ ရခိုင် ပြည်နယ် ကမန်မွတ် စလင်မ် တို့အပြင် စစ်တွေမြို့ အရှေ့ပိုင်းဒေသ များ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် သံတွဲ တစ်ဝိုက်တွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြ သော အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ရခိုင်များ အနှံ့အပြားရှိ နေသည်။
၁၅၃၉ အေဒီတွင် တပင်ရွှေထီး ပဲခူးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် ၁၅၉၉ အေဒီတွင် တောင်ငူဘုရင် ပဲခူးကို တိုက် ခိုက်ခဲ့စဉ်တွင်ဖမ်းဆီး ရမိသော မွတ်စလင်မ်များ ၁၅၄၇ အေဒီတွင် တပင်ရွှေထီး မြို့ဟောင်းမြို့ ကို ၀င်တိုက် ခဲ့စဉ် နှင့်
၁၇၀၇ အေဒီတွင်စနေမင်း၏ အရာရှိ များ သံတွဲကို တိုက်ခိုက် ခဲ့စဉ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ သော မွတ်စလင်မ်များ၊ ၁၆၁၃ အေဒီတွင် အနောက်ဘက်လွန်မင်း သန်လျင်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ စဉ် သန် လျင်မြို့ ကျပြီးစအခါ ဒီဗရစ်တို၏ နောက်လိုက်
မွတ်စလင်များ (သို့မဟုတ်) စစ်ပွဲပြီး စ အချိန်နှောင်း မှ ရောက် ရှိလာသော သင်္ဘော များမမွတ်စလင် များအား ရွှေဘိုခရိုင်၊ မြေဒူး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ ပင်းယနှင့် ခံလူး၌ လည်းကောင်း၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင် လက်ပံ၌လည်း ကောင်း၊ ရမည်းသင်းခရိုင်
ယင်းတော် တို့၌လည်းကောင်း နေရာချထားခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၆၃-ခုနှစ် (၁၈၀၁ အေဒီ) နယုန်လပြည့်ကျော် ၂-ရက်တွင် ရွှေတိုက်ပုရပိုက်မှ ကျောက်တစ်လုံးကို ဗိုလ်မင်းရဲလှ ကျော်ထင် ရေးကူးသော စစ်တမ်း တွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၀၆၀ မှ ၁၀၇၆ အထိ နန်းစံသော အင်းဝ စနေမင်း လက်ထက်တွင် ရခိုင် ဘက်မှ ၀င် ရောက်လာသောမွတ်စလင် ၃၀၀၀ ကျော်အား မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၀၇၀ (၁၇၀၉ အေဒီ)တွင် အောက် ဖော်ပြပါ ၁၂-နေရာ ၌ နေရာချထားခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရသည်။
(၁) တောင်ငူ (၂) ရမည်းသင်း (၃) ညောင်ရမ်း (၄) ယင်းတော် (၅) မိတ္ထီလာ (၆) ပင်းတလဲ (၇) တဘက်ဆွဲ (၈) ဘောဓိ (၉)
သာစည် (၁၀) စည်ပုတ္တရာ (၁၁) မြေဒူး (၁၂) ဒီပဲယင်း စသည်တို့ တွင် ဖြစ်သည်။အ ထက် ဖော်ပြ ပါ အတိုင်း အစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်တို့သည် အာရဗ်သင်္ဘောများပျက်၍ ၀င်ရောက်နေ ထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အာရဗ်ပါရှန်ကုန်သည်များ
ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေး စခန်း များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ သို့ ရွေှ့ပြောင်းနေထိုင်
ခဲ့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
← ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(3)
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 5) →